Izinhlobo zamahlathi eSpain | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izinhlobo zamahlathi eSpain
Siphila ezweni elinezimo zezulu ezahlukahlukene ezithakazelisayo, futhi kuzo zonke zazo kunezitshalo ezithile nezinqwaba zezitshalo ezenza iSpain izwe lesibili laseYurophu elinamahlathi amaningi kakhulu, enamahektha ayizigidi ezingama-26,27, amele ama-57% endawo.
Kodwa, Yiziphi izinhlobo zamahlathi eSpain?
Amahlathi esiwathola lapha awela ezifundeni ezimbili zezimila nezimila, okuyi-Eurosiberian neMedithera. Ake sibone ukuthi zihluke kanjani:
1 Isifunda sase-Eurosiberian
2 Isifunda saseMedithera
Lesi sifunda simelela indawo ye-Atlantic, esenyakatho nePortugal, edlula eGalicia, i-Principality of Asturias, iCantabria, izwe laseBasque, kanye nentshonalanga nesenkabeni yePyrenees. Isimo sezulu lapha sinomswakama, sithanjiswe ithonya lasolwandle, ngobusika obumnene kuya obubandayo lapho kubhalwa khona amakhaza abalulekile. (kufika ku -18ºC). Cishe azikho izikhathi zesomiso, ngakho-ke indawo ihlala iluhlaza okotshani, ngaphandle kwasekwindla, okuyilapho izihlahla ezinqabayo zishintsha umbala zingabi namaqabunga ngokuphelele ukuze zikwazi ukunqoba ubusika.
Izinhlobo zehlathi kule ndawo yilezi:
Izihlahla ze-Beech: i-beech (I-Fagus sylvatica), yizihlahla ezimele kakhulu ezisenyakatho yeSpain. Zikhula phakathi kuka-800 no-1500m wokuphakama, emhlabathini opholile, one-asidi encane.
Izihlahla ze-oki: ama-oki, ikakhulukazi i-carballo (I-Quercus robur), ikhula endaweni yase-Atlantic, kuze kufike ku-600m altitude.
Izihlahla zeBirch: Izihlahla zeBirch zakha amahlathi amancane ekuhlanzweni kwe-beech, enhlabathini ene-asidi.
Izihlahla zemisayidi: umuthi omhlophe (U-Abies alba) isezintabeni zePyrenees, ukusuka eNavarra kuya eMontseny, ezindaweni eziphakeme ezisukela ku-700 kuye ku-1700m.
Lesi sifunda simele enye ingxenye yesifundazwe, kanye neBalearic Islands. Lapha inkathi eyomile ibonakala kakhulu, futhi ingahlala ezinyangeni ezimbili kuya kwezine. Imvula ingaba kusuka ku-1500mm kuye ngaphansi kuka-350mm, futhi kwenzeka into efanayo nangesithwathwa: kuya ngendawo, amazinga okushisa afinyelela ku -15ºC noma ngaphezulu angarekhodwa, noma ngokuphambene kungenzeka kungabi khona amakhaza kwaphela iminyaka eminingana, bese unenye efinyelela ku -4ºC. Ngokwesinye isandla, Amazinga okushisa aphezulu angaba ngu-30ºC noma ngaphezulu, futhi angafinyelela ku-42ºC.
I-Melojares: kuphi i- I-Quercus pyrenaica (noma i-melojos). Banobunikazi be-subatlantic, futhi basuka ku-700 kuye ku-1600m wokuphakama.
Amahlathi eRiparian: yilezo lapho kukhula khona izihlahla ezinamanzi, zizigcine zibonga umswakama onomphela wenhlabathi.
I-Pinsapares: lolu hlobo lwehlathi kulapho i-fir Mediterranean ihlala khona (abies pinsapo), ezintabeni zaseMalaga naseCádiz. Kuyihlathi eliminyene futhi elimnyama, elinemvula eningi kakhulu (cishe ngo-2000-3000mm), esendaweni ephakeme ngaphezu kwe-1000m.
Ama-oki e-Holmizihlahla ze-holm (I-Quercus ilex) izihlahla zingenye yezihlahla ezivumelana nezimo kakhulu futhi ezingazweli. Zikhula zisuka olwandle ziye ku-1400m, ngakho-ke zakha amahlathi ngisho nasogwini.
Izihlahla zikakhokho: la mahlathi athatha amahektha ayisigidi eNhlonhlo Yase-Iberia. Zikhula enhlabathini enesihlabathi, ngesimo sezulu esipholile esinemvula ejwayelekile.
Ama-Quejigares: AmaQuejigares ajwayelekile e-Andalusia, kepha ungawathola naseCatalonia.
Izihlahla zikaphayini: amaphayini akhula kusuka olwandle afike ku-2400m. ESpain sithola ngaphezu kwawo wonke uphayini omnyama (UPinus uncinata) kanye ne-Scots pine (UPinus sylvestris).
Ama-Sabinares: Amajunipha akhula emathafeni angaphakathi nezwe, imvamisa angaphezulu kuka-900m wokuwa. Zivumelaniswa nesimo sezulu sezwekazi, nobusika obubandayo namakhaza ashisa kakhulu.
Isihlava sezintaba eziphakeme zaseMedithera: ezintabeni eziphakeme zaseMedithera, ngaphezulu kwe-1700m yokuphakama, ubusika bunzima kakhulu futhi buhlala isikhathi eside. Lapho iqhwa linyamalala, umhlabathi uyoma masisha ngenxa yokukhanya kwelanga okuqinile namazinga okushisa aphezulu ehlobo.
Ubuwazi ukuthi kunezinhlobo eziningi zehlathi eSpain?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izinhlobo zamahlathi eSpain